Bots egwu kacha mma maka Discord - VidaBytes | LifeBytes
Iris Gamen | 11/06/2022 20:00 | Mmemme
Ọ bụrụ na ị na-emikpu n'ime ụwa Discord, ị na-eche na ebe a na-akparịta ụka n'Ịntanet aghọwo ihe na-agwụ ike, post a ga-amasị gị kemgbe. anyị ga-ekwu maka bots egwu kacha mma maka Discord. Ndị ọrụ niile nke ihe nkesa a na-achọ inye ọwa ha ọdịdị pụrụ iche, ma ọ bụ naanị ịmara nke kacha mma maka ya.
Ihe ikpo okwu a, na-enye gị ohere nke inwe ike ịmepụta oghere maka mmasị gị, na-agbakwụnye ihe dị iche iche na-eme ka ọ bụrụ nkeonwe. Ị nwere ike ịmepụta ọwa, sava na ọbụna mepụta bots nke gị dịka mmasị gị si dị.
Discord, abụrụla otu n'ime usoro izi ozi ịntanetị kachasị mkpa. Enwere ụdị bots dị iche iche ị ga-agbakwunye na ikpo okwu a, nke nwere ike ịmalite site na ndị na-eme ka mkparịta ụka gbanwee, na ndị isi ọrụ ha bụ ịme ntụrụndụ, dị ka egwu egwu. Ọbụghị naanị na anyị na-ewetara gị mkpokọta bots egwu kacha mma, mana maka ndị na-amaghị Discord anyị ga-ekwukwa maka ya.
1 Esemokwu; ihe ọ bụ na kedu ọrụ ọ nwere
2 Kedu ihe bụ bots na Discord?
3 Bots egwu kacha mma maka Discord
3.1 Ụgbọ mmiri
Esemokwu; ihe ọ bụ na kedu ọrụ ọ nwere
Isi mmalite: https://support.discord.com/
N'ezie ọ bụrụ na ị na-emetụta ụwa gamer, ị ga-ama nke a n'elu ikpo okwu nke ọma. Ebe ọ bụ na, ọ nwere ọrụ nke ịhazi, izute ndị ọhụrụ na iso ndị enyi gị na-ekwurịta okwu. Ọ gbasara ngwa nkata dị ka nyiwe ndị ọzọ nwere otu ọrụ.
Na ụkpụrụ, ọ na-ezubere maka ndị ọrụ n'ime ụwa egwuregwu, ebe ha nwere ike izute, na-ahazi ụzọ ha si egwu na ikwu okwu mgbe ha na-egwu egwuregwu. Ọ bụghị naanị ndị egwuregwu na-eji ya eme ihe, kamakwa ụfọdụ ụlọ ọrụ nwere nnukwu ọrụ.
Inwe ike ịkparịta ụka site na ngwa a bụ usoro dị mfe, na mgbakwunye na ịnye gị ọrụ ọchụchọ dị iche iche iji chọta otu onye wee nwee ike itinye ha na listi kọntaktị gị. ikpo okwu a Enwere ike ịkọwa ya na okwu abụọ, nhazi na nzikọrịta ozi.
Dịka anyị kwurula, ọtụtụ n'ime sava ndị dị n'elu ikpo okwu a metụtara ụwa egwuregwu vidiyo, kamakwa ị nwere ike ịchọta sava dị iche iche ebe a na-atụle isiokwu ndị ọzọ dị ka anime, akụ na ụba, ahụike uche, ma ọ bụ naanị izute ndị ọhụrụ na ime enyi ọhụrụ.
Ezie, pụtara na ndị ọzọ maka ụdị nkata dị iche iche. Ọzọkwa, ọ naghị ebelata egwuregwu ahụ mgbe ị na-akparịta ụka n'ịntanetị na ndị enyi gị ma ọ bụ ndị otu gị. Ekele maka ịmepụta ọrụ n'ime ihe nkesa, ị nwere ike ijikwa ma gbanwee ihe na-eme na ihe nkesa ma ọ bụrụ na onye mmepụta isi anọghị ya.
Kedu ihe bụ bots na Discord?
Bots na Discord, bụ mmemme nke ọrụ ha bụ ịrụ ọrụ na-akpaghị aka. Ọrụ ndị a nwere ike ịdị site na ịkpọ egwu gaa na mmekọrịta dị mfe n'etiti ndị ọrụ nkesa.
Dabere na ihe ịchọrọ imezu, ị ga-etinye otu bot. Ndị a obere mmemme ha ga-enyere gị aka ịtọhapụ onwe gị na ọrụ ndị ahụ kacha agwụ ike. A ghaghị ịhazi ha ka ha wee gaa nke ọma n'oge ọrụ ha.
Site ebe a, anyị na-adụ ọdụ ka ị etinyela bots na-enweghị njikwa ọ bụla, ọ ka mma ka i wepụta oge iji chọta nke ga-adabara gị uru. Site na ịme mkpebi a, ị ga-ezere nsogbu na mgbagwoju anya n'etiti ndị ọrụ.
Ụdị bot a dị mkpa maka ihe nkesa Discord ọ bụla. Mụ na ha, ị ga-enwe ike ịkpọ egwu nke ndị niile so na ihe nkesa ga-anụ, naanị ịgbalite ụfọdụ iwu.
Na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke bots na ahịa maka nzube a, ọ dịghị mfe ịchọta nke ga-enye nsonaazụ kacha mma. Ya mere, na post a anyị na-enye gị ntụziaka zuru ezu maka ụfọdụ nke kacha mma.
Otu n'ime bots playback egwu kachasị zuru oke na ewu ewu n'etiti ndị ọrụ Discord. Ọ ga-enye gị ohere ịkpọ egwu sitere na nyiwe dị iche iche dị ka YouTube, Vimeo, SoundCould, wdg, na-eji ogo ọdịyo kachasị mma mgbe niile yana n'efu.
Ọzọkwa na-enye gị ike ịmepụta listi ọkpụkpọ ahaziri iche. Tinye, nke dakọtara na nyiwe egwu egwu dị ka Twitch.
Bot egwu egwu ọzọ siri ike, nwere nnukwu ọrụ dị iche iche. Site na njikwa njikwa ị ga-enwe ike hazie ọrụ dị iche iche agbanyere ma ọ bụ iwu nke ịchọrọ ịhazi. Na mgbakwunye, ọ nwere ọrụ iji nwee ike ịmegharị, ogbi ma ọ bụ machibido ndị ọrụ na-emebi iwu ọ bụla ruo nwa oge.
Bot egwu efu maka Discord. Ọ na-agụnye ọrụ yiri nnọọ ndị ọzọ nke obere mmemme dị ka ekwe omume ịkpọ egwu sitere na nyiwe ndị ọzọ dị ka YouTube, Twitch, Mixer, Bandcamp na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke mgbasa ozi.
Site na njiri egwu ya, ị nwere ike ịfefe na egwu na-esote, loop, bugharịa, wepụ n'ahịrị, wdg. Ọzọkwa, Chip nwere nhọrọ igosi gị egwu nke egwu ahọpụtara.
Ebumnuche bụ isi nke bot a maka Discord bụ dozie ihe niile metụtara imeru ihe n'ókè, ntụrụndụ na egwu. Otu n'ime isi ihe dị mma bụ na ọ bụ n'asụsụ Spanish, nke ga-eme ka njikwa ya dịkwuo mfe maka ndị ọrụ.
Ayana bụ bot, nwere ike ịhazi ya nke ọma maka ihe onye ọrụ ọ bụla chọrọ. Site na akpaaka, ị ga-enwe ike ịhazi ọdịnaya nke sava ahụ. Ọ nwere ihe nkesa egwu site na iwu na listi ọkpụkpọ ebe ị nwere ike itinye egwu ọkacha mmasị gị, inwe ike imeghachi omume na egwu ndị ọrụ ndị ọzọ na-egwu.
Ọtụtụ ewu ewu na ndị na-achọ a moderation bot, ma na mgbakwunye, ọ nwekwara ike ịkpọ egwu. Nyochaa nkata na sava na-akpaghị aka ka ịzenarị omume ndị megidere iwu. Site na usoro iwu, ndị ọrụ mejọrọ nwere ike mechie ọnụ ma ọ bụ chụpụ ya.
Ọ dakọtara na nyiwe egwu ndị ọzọ dị ka YouTube, Twitch ma ọ bụ SoundCloud. Tinye, na MEE6 gụnyere egwuregwu egwu na-atọ ụtọ ka gị na ndị mmekọ gị na-enwe obi ụtọ, ebe ị ga-echepụta egwu na onye na-ese ihe na-egwu.
N'ikpeazụ, anyị na-ewetara gị ihe ọhụrụ a egwu bot nke ga-enye gị ohere ige egwu na kọntaktị sava gị. Enwere ike ịhazi ya, na-enye gị ike ịtọ ọrụ ọkpụkpọ, wepụ egwu oyiri, na ọbụna mepụta ọwa blacklist.
Bots ndị a niile anyị kwurula na ọtụtụ ndị ọzọ dị maka nbudata na wụnye na Discord. Onye ọ bụla n'ime ha ga-enye gị usoro ngwaọrụ dị iche iche ọ bụghị naanị na-agafeghị oke, kamakwa ọ ga-eme ka nkata gị bụrụ ebe na-atọ ụtọ karị.
Enwere ọtụtụ ihe ị ga-achọpụta gbasara ngwa izi ozi a, mana ka ọ na-eme, mee ka ihe nkesa gị bụrụ ụwa pụrụ iche site na iji bots ọkacha mmasị gị hazie ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndụ LifeBytes » Mmemme » Bots egwu kacha mma maka Discord